Owesilisa ubulale unina emsola ngokuthakatha | News24
Owesilisa ubulale unina emsola ngokuthakatha
Mpumalanga - Kulindeleke ukuba ivele eNkantolo yeMantshi yaseTonga eMpumalanga indoda eneminyaka engu-26 ubudala ngezinsolo zokubulala unina ngempelasonto yePhasika.
Okhulumela amaphoyisa uBrigadier Leonard Hlathi uthe umsolwa kusolakala ukuthi usole unina ngokuthakatha kulesi sigameko esenzeke eMdladla Trust eduzane naseMalalane ngeSonto, kubika iLowvelder.
"Umsolwa ube esethatha isikelo wagwaza ngaso unina. Amaphoyisa nabosizo lokuqala babizelwe endaweni yesigameko, bafika isisulu sesishonile. Amaphoyisa avule icala lokubulala," kusho uHlathi.
OLUNYE UDABA: Kubulawe owesifazane ngezinsolo zokuthakatha
Umsolwa uzovela enkantolo kusasa (ngoLwesine).
Khonamaknjalo, kwesinye isigameko esenzeke ngalo lolu suku, indoda eneminyaka engu-26 ubudala ishaywe yabulawa ngamadoda amathathu eNaas, ngakhona eMalalane.
"Kubikwa ukuthi amadoda amathathu aneminyaka ephakathi kwengu-21 nengu-23 ubudala, ahlanganyela isisulu ngesikhathi siphuma ethaveni ezintatha asisola ngokuwabamba inkunzi. Abe esebeqala esishaya saze sashona," kuqhuba uHlathi.
Kuphenywa icala lokubulala. Bobathathu abasolwa baboshwa kanti bazovela kusasa (ngoLwesine) eNkantolo yeMantshi yaseTonga.